IMelomania Touch, ii-headphone ezintle ezivela eCambridge Audio | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 01/01/2021 18:00 | Ukuhlaziywa ukuba 23/12/2020 00:28 | ngokubanzi, Reviews
Ngamanye amaxesha sele sihlalutye imveliso evela kwiCambridge Audio, eyomeleleyo eyomeleleyo ifemi yomgangatho esekwe e-United Kingdom kwaye yaziwa ngokubanzi ngomgangatho weemveliso zayo. Ngeli xesha siza kuhamba nemveliso esandula ukumiliselwa esingafuni kuyiphosa UMelomania Touch.
Ii-headphone ze-True Wireless zamva nje (ze-TWS) ezivela kwiCambridge Audio zifikile kwintengiso kwaye sazivavanya. Sikuxelela uhlalutyo lwethu olunzulu lweCambridge Audio Melomania Touch nazo zonke iinkcukacha zayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, inkampani yase-Bhritane iphinde yenze umsebenzi osemgangathweni ophezulu.
1 Uyilo: Bold kunye nomgangatho
2 Iimpawu zobugcisa: Hi-Fi centric
3 Umgangatho womsindo: Uhlalutyo lwethu
4 Uhlelo lokusebenza lweMelomania, ixabiso elongeziweyo
5 Ukuzimela kunye namava omsebenzisi
Uyilo: Bold kunye nomgangatho
Ungabathanda ngakumbi okanye ungabathandi kangako, kodwa sele uyazi ukuba kuhlalutyo lwam ndiyathanda ukuqhwaba ii-brand eziziqhelanisa nesithukuthezi okanye umgangatho kwaye zikhethe uyilo olunobuganga okanye olwahlukileyo. Injalo imeko ye-Melomania Touch, ii-headphone ezintsha zeCambridge.
Ubuthandile? Ungazithenga ngexabiso elifanelekileyo nge LE LINK.
Kulungile inkampani yaseBritane Ubanga ukuba uhlalutye ngeenxa zonke i-3000 yeendlebe ezahlukeneyo kwaye eyona nto ibalaseleyo yile iyilwe ngendlela engaqhelekanga. Ngaphandle sifumana iplastiki ebunjiweyo ekhangeleka intle, izigqubuthelo zerabha ezimbalwa kunye neepads zayo.
Ngokwam soy kwabo baneengxaki ngee-headphone ezisezindlebeni kuba ndilahla zonke iimodeli. Oku akwenzeki kum ngeMelomania Touch, bane- silicone "fin" eyenza ukuba ii-headphone zingahambi kwaye zilungele zonke iintlobo zemisebenzi. Inani elikhulu leepads ezibandakanyiweyo kwimveliso zenza ukuba kube nzima ukungazilungelelanisi ukuthanda kwakho.
Ubukhulu Ityala lokutshaja: 30 x 72 x 44mm
Ubukhulu Ii-headphone: Ubunzulu be-23 x Ukuphakama (i-earpiece ngaphandle kwehuku) 24 mm
U bunzima Ityala: 55,6 iigrem
U bunzima YoLungiso: 5,9 iigrem inye
Kuyachukumisa ukuthetha ngokucacileyo kwekhava. Sifumana ityala lokutshaja leprimiyamu, elenziwe ngesikhumba sokulingisa ngaphandle, inee-LED zesikhombisi ezintlanu kunye nezibuko le-USB-C ngasemva. Ibhokisi inemilo embhoxo kunye nobungakanani be-compact kwaye ikhululekile ukuhanjiswa, kubonakala ngathi iyimpumelelo kwaye inyani kukuba ikumgangatho ophakamileyo.
Okokugqibela, qaphela ukuba singazithenga ii-headphones ngombala omnyama nomnyama, kuxhomekeke kukhetho lwethu kunye nezinto esizithandayo.
Iimpawu zobugcisa: Hi-Fi centric
Makhe sithethe amanani kwaye siqale nge-32-bit ye-processor-core processor kunye ne-single-core audio audio subsystem. IQualcomm QCC3020 Kalimba 120MHz DSP, Ngale ndlela nangaphaya I-Bluetooth 5.0 iklasi 2 Sifumana amandla okudlulisa izandi ekumgangatho ophezulu, nangona uninzi lunento yokwenza noku iikhowudi: iAptX ™, iAAC kunye ne-SBC eneeprofayile ze-A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Ngoku siya ngqo kubaqhubi, ezo zithethi zincinci ngaphakathi kweefowuni eziguqula ukuqhubekeka okungaka kwisandi esisemgangathweni. Sinesistim esinamandla esine-diaphragm eyomeleziweyo ye-7 mm, isiphumo sedatha elandelayo:
Ukuphindaphinda: 20 Hz - 20 kHz
Ukuphazamiseka kweHarmonic: <0,04% kwi-1 kHz 1 mW
Kwinqanaba lobuchwephesha, kufuneka sikhankanye ii-microphone, kwaye sinezixhobo ezimbini ze-MEMS ezinokucinywa kwengxolo ye-cVc (ekwaQualcomm) kunye novakalelo lwe-100 db SPL kwi-1 kHz.
Sinalo ngaphakathi ityala kunye nebhetri ye-500 mAh kuphela Kwaye iyakubiza nge-5V ngentambo yokutshaja ye-USB-C, hayi iadaptha yamandla. Oku kuyakufuna malunga nemizuzu eli-120 yentlawulo epheleleyo ukusuka kwi-0% ukuya kwi-100%.
Umgangatho womsindo: Uhlalutyo lwethu
Sele uwabonile amanani amaninzi akuxelela ngokungekho nto ngaphandle kokuba unolwazi oluthile, ke makhe siye kuhlalutyo lwethu oluqhelekileyo, yintoni amava ethu okuwasebenzisa, ngakumbi xa sijonga ukuba apha sizame phantse zonke isiphelo eliphezulu TWS headphone Ezifumaneka kwimarike.
Phantsi: Ngokunyaniseka, xa ii-headphone zinephrofayili esezantsi, sihlala sijongana nemveliso yorhwebo efuna ukugubungela ezinye iintsilelo. Oku akunjalo ngeMelomania Touch, yayiyinto enokulindelwa kuthathelwa ingqalelo ukuba bayimveliso yeCambridge Audio. Nangona kunjalo, inyani yokuba bengafiki kusetiwe ngeebhasi eziphambili ayithethi ukuba abanakubonakala benjalo, siza kuthetha ngale nto kamva. I-bass kulapho kufuneka ibekhona kwaye isivumela ukuba simamele kuwo wonke umxholo. Ngokucacileyo, ukuba ucinga ukumamela kuphela i-reggaeton yorhwebo, isenokungabi yimveliso yakho.
Imidiya: Njengesiqhelo, senza uvavanyo lomqhaphu kunye neKumkanikazi, ingubo kunye neenkawu zeArtic. Zimbalwa ii-headphone ezinokukhohlisa lo mculo kwaye sifumana umahluko ochanekileyo wezixhobo.
Ngokubanzi, asinalahleko esemgangathweni, asinakuphazamiseka kwaye amazwi aviwa kakuhle. Uvavanyo lwethu lwenziwe ngeHuawei P40 Pro ene-aptX kunye ne-iPhone nge-AAC.
Uhlelo lokusebenza lweMelomania, ixabiso elongeziweyo
Kudala sivavanya isicelo Melomania kwisigaba se-beta. Iziphumo bezizodwa, isicelo siyakusivumela konke oku. Ungasifumana isicelo sobabini i-iOS kunye ne-Android (ngeli xesha lokubhala alikakhululwa ngokusemthethweni).
Yenza iinkangeleko zesiko
Qalisa / usebenze imisebenzi yokuthinta
Yenza / khubaza imo yokubonisa elubala
Akuthandabuzeki Kubaluleke kakhulu ukukwazi ukufumana uhlaziyo (ezimbini ngelixa sasibavavanya) kwaye ngaphezulu kwako konke ukwenza umgangatho womculo ube semgangathweni kwii-headphone zeli nqanaba, bravo ukuya kwiCambridge Audio.
Siqala ngokuzimela, Iiyure ezingama-50 zizonke ukuba sithathela ingqalelo ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-9 eziqhubekayo (kuphela ngeprofayili ye-A2DP) kunye ne-41 eseleyo ebonelelwe yibhokisi. Inyani yile yokuba sifumana malunga neeyure ezisi-7 zesandi esiqhubekekayo kumgangatho ophezulu kwaye imo yokungafihli nto yenziwe yangasebenzi, malunga neeyure ezingama-35/40 zizonke kwimiqulu ephezulu.
Ngokusetyenziswa ixesha elide bakhululekile, iNokuba sisebenzisa iMowudi yokuNgafihli, eziza kufumana izandi ezinje ngeialamu okanye amazwi ngeemakrofoni ukuze ziphinde ziveliswe ngokucacileyo, kwaye kukuba ukubekwa kweendlebe ezindlebeni ngokubambelela okungafaniyo, sinokurhoxiswa komsindo okwaneleyo ukonwabela umculo kwaye indlela yoKwenziwa kwezinto elubala inokuba yimfuneko.
Amava am ngeMelomania Touch ibilungile, siphinde sajongana nemveliso yeprimiyamu evela kwiCambridge Audio, oku kuyabonakaliswa kwixabiso layo, ukusuka kwi-139 euros Ungazithenga zombini kwiwebhusayithi yayo esemthethweni nange LE LINK.
Ithunyelwe nge: 1 de enero de 2021
Utshintsho lokugqibela: I-23 ngoDisemba 2020
Izinto ezisemgangathweni kunye noyilo, yiva ipremiyamu
Ukwenza umntu kwiApp yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » IMelomania Touch, ii-headphone ezintle ezivela eCambridge Audio